Eswatini Udo Mgbe Alaeze Ghara Ime Ihe Ike Ngagharị |
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ Njem Eswatini » Eswatini Udo Mgbe Alaeze Ghara Ime Ihe Ike
Eswatini Udo Mgbe Alaeze Ghara Ime Ihe Ike
A na-amarakarị alaeze Eswatini dị ka udo, kwụsie ike wee bụrụ onye ọbịa ndị njem njem nlegharị anya nke Africa n'oge na-adịbeghị anya. Obodo a dị n’Africa na-enweghị mmiri ghọrọ ọgba aghara mgbe ọgbaghara malitere. O yiri ka enwetaghachila nchebe.
Mbabane, isi obodo nke alaeze Eswatini dị jụụ na enweghị ndị njem na ndị mmadụ n'okporo ámá. Ndị ọrụ nchekwa yiri ka ha na-achịkwa ọzọ mgbe ụfọdụ ndị kwuru na ọ bụ ọgba aghara.
Ọ bụkarịrị ndị na-eto eto na-eme ngagharị iwe achọrọ Eswatini mezigharị mmezigharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma nye ndị otu ndọrọ ndọrọ ohere. Ha na-arịọ ka Onye Isi Eze Mswati nyefee ike ya zuru oke ma họpụta Mịnịsta Ala na-elekọta obodo ahụ.
A maara Eswatini dị ka obodo udo, yana ndị nwere nnukwu obi. Ndị njem njem nlegharị anya nke Africa mere Eswatini ụlọ ha na mbido ọnwa a na-enyere aka na nnukwu ihe omume ọdịnala na-abịanụ.
Mba ahụ na-eche ihu ngagharị iwe ruo ọtụtụ ụbọchị na ọ dịkarịa ala ebe 10 dị iche iche, na-amanye ndị uwe ojii iji chụsasị ndị na-eme ngagharị iwe na anwụrụ ọkụ na mgbọ ndụ, na-eduga na mmerụ ahụ.
A kọọrọ na Onyeisi Eze Mswati nke Atọ hapụrụ mba ahụ. Onye osote praịm minista bụ Themba Masuku wepụtara nkwupụta gọọmentị na-agọnahụ nke a, na-ekwe nkwa mmelite banyere ọnọdụ taa.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke ndị njem nlegharị anya n'Africa nọ ugbu a na Eswatini wee kparịta ụka eTurboNews na mbụ: “Ọnọdụ dị n'isi obodo ahụ achịkwaala. E kpọbatara ndị agha ahụ. ”
Ncube kwuru, sị: “Anyị na-aga n’ihu na njikọ anyị na otu kọmitii nke Mịnịsta kenyere ka ọ duru ma leghaara mmemme anya maka 2022 Continental’ Cultural Festival ebe anyị na-atụ anya karịa ndị otu 25 ndị ​​otu mara na Alaeze Eswatini iji gosipụta ọgaranya dị iche iche nke nganga Africa na Arts na Omenala.
Enweela mkparịta ụka na Mịnịsta nke njem nlegharị anya Hon Vilakati bụ onye nwere mmụọ dị elu wee kwado nkwado ya na-enweghị nkewa maka nnukwu atụmatụ a iji mee ka Africa gbakọta ọnụ nke Minista ahụ n'onwe ya na UNESCO rụkọtara ma soro ya Ndị njem nlegharị anya nke Africa."
"Post Covid ATB gbalịsiri ike ịdegharị aha na ịhazi kọntinent ahụ dịka ntinye ego kachasị mkpa na njem nleta nke ndị njem."
Nke a kwughachiri site na Hon. Mịnịsta nke njem nlegharị anya Moses Vilakati. Ọ gwara eTurboNews: “E nwere ọgba aghara ụfọdụ ndị ntorobịa kpatara. Ndị agha na-achịkwa ya ugbu a. ”
Ngagharị iwe a, nke a na-agba ọkụ ma na-apụnara gwongworo, gbalitere ọtụtụ ụbọchị gara aga mgbe ọchịchị eze na gọọmentị nyere iwu na-egbochi nnyefe nke arịrịọ nke chọrọ maka mgbanwe ọchịchị onye kwuo uche ya, Akụkọ Swaziland kọrọ.
Onye ndu Eswatini na-achị obodo ahụ dịka eze zuru oke ma ọ bụ ya na-ahọpụta onye praịm minista, ndị minista, ndị ọka ikpe na ndị ọrụ bekee.
A na-akpọkarị Eswatini, nke a na-akpọbu Swaziland dị ka obodo udo.
Ndị njem njem nlegharị anya nke Africa mere Eswatini ụlọ ọhụrụ ha, na mba ahụ na-eme atụmatụ nnukwu ememme ọdịnala ịmaliteghachi njem ya na njem nlegharị anya.
Enwere ike ịtụ anya na udo dị ugbu a nwere ike ịdịgide. Sources gwara eTurboNews “E nwere ndị mpụga agha eweta na mgboagha. ”
Ekwesiri ighota ya na ala eze nke Eswatini na-achoputa Taiwan ma obu soso obodo di na mpaghara.
ESWATINI UNREST: Ndị agha ebubatara, ọgba aghara malitere na isi obodo, Mbabane.#eSwatinipic.twitter.com/gaYBE9x1Ga
- nwachukwu 🇿🇦 (@nkeigbo) June 29, 2021